2017 – Year – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Voice (2017) Season4Unicode Voice ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် 2021 ထွက် ဂျွန်စောပါဝင်တဲ့ Voice Season4လာပါပီ။ Voice Series တွေမကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက် Season 1,2,3 သုံးခုလုံးChannel M-sub App တွေမှာ Stream & Download လုပ်လို့ရပါတယ်။ Voice Series တွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အကြားအာရုံကောင်းတဲ့ ရဲမေ လီဟာနာနဲ့ ဒီတစ်ခါ ဂျွန်စောတို့ပူပေါင်းပီး မူခင်းတွေကိုဘယ်လို သည်းထိတ်ရင်ဖို ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ပါအုံး အခု Season ကတော့ Mia Mina နဲ့ May Zin တို့က ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ် Zawgyi Voice ဇာတ္လမ္းတြဲေတြႏွစ္သက္တဲ့သူေတြအတြက္ 2021 ထြက္ ဂြၽန္ေစာပါဝင္တဲ့ Voice Season4လာပါပီ။ Voice Series ေတြမၾကည့္ဖူးတဲ့သူေတြအတြက္ Season 1,2,3 သုံးခုလုံးChannel M-sub App ...
Voice (2017) Season 4
Money Heist (2017) Season4Complete Unicode 2017 May2 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Money Heist( စပိန်လိုကတော့ La casa de papel သို့The Paper House ) လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီးရီးဟာဆိုရင် Spain နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ဒီစီးရီဟာ Limited series ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရီးကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကတော့ Lex Pina ဖြစ်ပြီးတော့အစောပိုင်းကတော့ စ ပိန်ရုပ်သံလိုင်းတခုဖြစ်တဲ့ Antena3အတွက်ဖန်တီးရိုက်ကူးပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးမှာတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ သဘောကျမှာအသေအချာပါပဲ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီကားဟာ စပိန်တလွှားမှာနာမည်ကျော်သွားတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးNetflixကနေတာဝန်ယူဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါတယ်။ Credit Review ဒီ Series ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Aung Kaung Myat ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi 2017 May2 ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Money Heist( စပိန္လိုကေတာ့ La casa de papel သို႔The Paper House ) လို႔ေခၚတဲ့ဒီစီးရီးဟာဆိုရင္ Spain ႏိုင္ငံမွာနာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီစီးရီဟာ Limited series ...
TMDb: 8.3/10 13184 votes
Money Heist (2017) Season4Complete
Prison Playbook (2017) Complete Unicode ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ Prison playbook ဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ကားလုံးက ထောင်ထဲမှာပဲဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ နာမည်ကြီး ဘေ့စ်ဘောကစားသမားရဲ့ မှုခင်းတခုကြောင့် ထောင်ကျတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကနေစပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးသမား, လူလိ်မ်, လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ, သူခိုးဂျပိုး စတဲ့ character တွေကအဓိကပါဝင်ပါတယ်။(စပွိုင်းမိမှာစိုးလို့ ဒီထိပဲရေးပါမယ်) Bromance တွေဖောဖောသီသီပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားပါ ဒီကားမှာတော့ လူတွေရဲ့ dark side & bright side နှစ်ခုကိုလဲတွေ့ရမှာပါ။ အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ထောင်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုပေမယ့် နောင်တရပြီး ပိုကောင်းအောင်နေတဲ့ လူတွေလဲရှိသလို၊ ဆိုးမြဲအတိုင်း မကောင်းတာပဲလုပ်နေတဲ့ Character တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ ထောင်သားအချင်းချင်းကိုမှ ခေါင်းပုံဖြတ် လူလည်ကျတာတွေ၊ အနို််င်ကျင့်တာတွေပါတွေ့ရမှာပါ။ ထောင်သားတွေတင်မကပဲ ထောင်ဝန်ထမ်း ရဲတွေရဲ့ ကောင်းတဲ့အပို်င်း မကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလဲကြည့်ရမှာပါ။ ထောင်တွင်းမှာ ဘယ်လို activity တွေလုပ်ကြရလဲ ဘယ်လိုနေထိုင်မှုပုံစံတွေရှိလဲ ကိုရီးယားတွေကတော့ ဘယ်​တော့မဆို အ​ပြင်ဘဝရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးရိုက် တယ်ဆိုပေမယ့် တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာတော့ ဒါကတစ်ကယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ထင်ရလောက်တဲ့ အိုဗာတင်းတာမျိုးတွေလဲ ပါတယ်ဆိုပေမယ့်ပေါ့။ Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးကတော့ Hnin S‌att ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဇာတ္လမ္းပုံစံကေတာ့ Prison playbook ဆိုတဲ့အတိုင္း တစ္ကားလုံးက ေထာင္ထဲမွာပဲဇာတ္အိမ္တည္ထားပါတယ္။ နာမည္ႀကီး ေဘ့စ္ေဘာကစားသမားရဲ႕ ...
Money Heist (2017) Season3Complete Unicode 2017 May2 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Money Heist( စပိန်လိုကတော့ La casa de papel သို့The Paper House ) လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီးရီးဟာဆိုရင် Spain နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ဒီစီးရီဟာ Limited series ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရီးကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကတော့ Lex Pina ဖြစ်ပြီးတော့အစောပိုင်းကတော့ စ ပိန်ရုပ်သံလိုင်းတခုဖြစ်တဲ့ Antena3အတွက်ဖန်တီးရိုက်ကူးပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးမှာတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ သဘောကျမှာအသေအချာပါပဲ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီကားဟာ စပိန်တလွှားမှာနာမည်ကျော်သွားတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးNetflixကနေတာဝန်ယူဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါတယ်။ Credit Review ဒီ Series ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi 2017 May2 ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Money Heist( စပိန္လိုကေတာ့ La casa de papel သို႔The Paper House ) လို႔ေခၚတဲ့ဒီစီးရီးဟာဆိုရင္ Spain ႏိုင္ငံမွာနာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီစီးရီဟာ Limited series ...
Voice (2017) Season3Complete Unicode Voice2မှာမပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့ အရှုပ်အထွေးတွေနဲ့အတူ 112 call centre ရဲ့ Director Kang ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ပြန်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ ရင်တစ်ထိတ်ထိတ် စောင့်ကြည့်ရမှာပါ Voice series ကို အခုမှစကြည့်မယ့်သူတွေအတွက် အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ချို့နဲ့ အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ရာဇဝတ်မှုခင်းဆိုင်ရာ သတင်းပေးပို့ချက်တွေကို ၂၄နာရီအပြည့် ဖုန်းလက်ခံဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ ၁၁၂ call centre Call centre ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ထူးခြားတဲ့ အကြားအာရုံပိုင်ရှင် ကန်ကွမ်ဂျူး (Lee Ha Na) Call centre ကို သတင်းပေးပို့လာတဲ့ ရာဇဝတ်မှုခင်းတွေကို အချိန်တိုအတွင်း လိုက်လံဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းပေးမယ့် golden time အဖွဲ့ မှုခင်းဖော်ထုတ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်သလောက် ဦးနှောက်အာရုံကြောဝေဒနာတစ်မျိုး ခံစားနေရတဲ့ golden time အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒိုကန်ဝူး (Lee Jin Wook) တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ သူတို့တွေ ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အဟန့်အတား အနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ ...
Voice (2017) Season2Complete Unicode သည်းထိတ်ရင်ဖို မှုခင်းဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ Voice ရဲ့ Season2ဖြစ်ပါတယ်။ Season 1 မှာတုန်းက ဇာတ်လမ်းကို ပြန်ဆက်ထားပြီး ဒီတခေါက်မှာလည်း 112 အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဌာနကို ခေါ်ဆိုလာကြတဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေထဲက လူတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်ပြီး မှုခင်းတွေကို လိုက်လံဖော်ထုတ်ကြပုံကိုလည်း ဆက်လက်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒီတခေါက်မှာတော့ Season 1 မှာ အဆုံးသတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ အဖြေကို ဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ မှုခင်ဖြစ်ပွားပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်း ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကို အောင်အောင်မြင်မြင်ရှာဖွေနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Season 1 မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားနေရာမှာ လီဂျင်ယော့ကို အစားထိုးထားပါတယ်။ မင်းသမီးကတော့ အရင်မင်းသမီး လီဟာနာပါပဲ။ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲချစ်သူတွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ စီးရီးတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Season2မှာတော့ အပိုင်း ၁၂ ပိုင်းပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် Credit Review ဒီ Series ...
American Gods (2017) Season2Complete Unicode ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရှဲဒိုးမွန်းဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ထောင်ထဲက ထွက်လာပြီး မိန်းမဆီကို ပြန်မယ့်နေ့မှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့ လူကြီးတစ်ဦးနဲ့ လေဆိပ်မှာ စတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူကြီးဟာ သူ့ဘဝအကြောင်းကို ထူးထူးဆန်းဆန်းသိနေပြီး သူ့ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ရှဲဒိုးမွန်းနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိတဲ့ လူကြီးတို့ အတူခရီးထွက်ရင်း ရှဲဒိုးမွန်းတစ်ယောက် သူမသိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲက ထူးဆန်းမှုမျိုးစုံနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အခါ.... Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Tracy ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ရွဲဒိုးမြန္းဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေထာင္ထဲက ထြက္လာၿပီး မိန္းမဆီကို ျပန္မယ့္ေန႔မွာပဲ ထူးဆန္းတဲ့ လူႀကီးတစ္ဦးနဲ႔ ေလဆိပ္မွာ စေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီလူႀကီးဟာ သူ႔ဘဝအေၾကာင္းကို ထူးထူးဆန္းဆန္းသိေနၿပီး သူ႔ကို အလုပ္လုပ္ဖို႔ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ရွဲဒိုးမြန္းနဲ႔ ဘယ္သူဘယ္ဝါမွန္းမသိတဲ့ လူႀကီးတို႔ အတူခရီးထြက္ရင္း ရွဲဒိုးမြန္းတစ္ေယာက္ သူမသိတဲ့ ကမာၻႀကီးထဲက ထူးဆန္းမႈမ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကဳံလာရတဲ့အခါ.... Credit Review ဒီဇာတ္ကားကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Tracy ျဖစ္ပါတယ္ Quality - Blu-ray 1080p Vip Server Episode 1 FuckCoup , Server M-File Episode2FuckCoup , Server ...
Voice (2017) Season 1 Complete Unicode အသည်းတထိတ်ထိတ် ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာကို ဖွဲ့နွဲ့ပြီး မရေးတတ်ပါဘူး။ စိတ္တဇလူသတ်သမားကို အသံကနေတဆင့် အမှုသွား အမှုလာကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ အတွဲ ၃ တွဲ ရှိတာမို့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိဆိုတာကတော့ ပရိသတ်ကြီးပဲ ကြည့်လိုက်ကြပါတော့။ Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Nyi Nyi ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi အသည္းတထိတ္ထိတ္ ရင္တဖိုဖိုနဲ႔ ၾကည့္ရမယ့္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕ၿပီး မေရးတတ္ပါဘူး။ စိတၱဇလူသတ္သမားကို အသံကေနတဆင့္ အမႈသြား အမႈလာကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္တဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုလို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲဟာ အတြဲ ၃ တြဲ ရွိတာမို႔ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္မႈ ရွိမရွိဆိုတာကေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးပဲ ၾကည့္လိုက္ၾကပါေတာ့။ Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Nyi Nyi ျဖစ္ပါတယ္ Quality - ...
Money Heist (2017) Season2Complete Unicode 2017 May2 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Money Heist( စပိန်လိုကတော့ La casa de papel သို့The Paper House ) လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီးရီးဟာဆိုရင် Spain နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ဒီစီးရီဟာ Limited series ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရီးကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကတော့ Lex Pina ဖြစ်ပြီးတော့အစောပိုင်းကတော့ စ ပိန်ရုပ်သံလိုင်းတခုဖြစ်တဲ့ Antena3အတွက်ဖန်တီးရိုက်ကူးပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးမှာတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ သဘောကျမှာအသေအချာပါပဲ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီကားဟာ စပိန်တလွှားမှာနာမည်ကျော်သွားတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးNetflixကနေတာဝန်ယူဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါတယ်။ Credit Review ဒီ Series ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi 2017 May2 ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Money Heist( စပိန္လိုကေတာ့ La casa de papel သို႔The Paper House ) လို႔ေခၚတဲ့ဒီစီးရီးဟာဆိုရင္ Spain ႏိုင္ငံမွာနာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီစီးရီဟာ Limited series ...
Money Heist (2017) Season 1 Complete Unicode 2017 May2 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Money Heist( စပိန်လိုကတော့ La casa de papel သို့The Paper House ) လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီးရီးဟာဆိုရင် Spain နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ဒီစီးရီဟာ Limited series ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရီးကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကတော့ Lex Pina ဖြစ်ပြီးတော့အစောပိုင်းကတော့ စ ပိန်ရုပ်သံလိုင်းတခုဖြစ်တဲ့ Antena3အတွက်ဖန်တီးရိုက်ကူးပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးမှာတော့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ သဘောကျမှာအသေအချာပါပဲ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီကားဟာ စပိန်တလွှားမှာနာမည်ကျော်သွားတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးNetflixကနေတာဝန်ယူဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါတယ်။ Credit Review ဒီ Series ကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi 2017 May2 ကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Money Heist( စပိန္လိုကေတာ့ La casa de papel သို႔The Paper House ) လို႔ေခၚတဲ့ဒီစီးရီးဟာဆိုရင္ Spain ႏိုင္ငံမွာနာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ဒီစီးရီဟာ Limited series ...
Strong Woman Do Bong Soon (2017) Complete Unicode မိန်းမဆန်တယ် ဆိုတာ ဘာလဲ ? မွေးရာပါ ထူးကဲတဲ့ခွန်အားကို ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာ အသုံချနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အဖြစ် Park Bo Young နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲ ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအပြည့်နဲ့ သူ့ရဲ့နာကြင်မှုတွေအပေါ်ရိုင်းစိုင်းမောက်မာတဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး အမွေခံသူဌေးသားဖြစ်သလို အင်တာနက် ဂိမ်းကုမ္မဏီ တစ်ခုရဲ့သူဌေး Ahn Min Hyuk အဖြစ် Park Hyuk Sik မင်းတို့တွေ ဘယ်လိုလူတွေလဲ? တရားမျှတမှု ကိုအရမ်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ စံပြ စုံထောက်အသစ်ကလေး In Guk Doo အဖြစ် Ji Soo Do Bong Soon (Park Bo Young) ကသာမာန်လူတွေထက်ထူးကဲလို့ မွေးရာပါ ခွန်အားကြီးမားသူမိန်းကလေးတစ်ယောက် သတိမထားမိတဲ့အခါမျိုးမှာ ထိလိုက်သမျှကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ် Bong Soon ကသူတစ်ဖက်သတ်ကြွေနေတဲ့ Guk Doo(Ji Soo) ရဲ့စိတ်ကူးထဲကချစ်သူပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ ကျော့ရှင်းလှပတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အရမ်းကိုဖြစ်ချင်နေပါတယ်တဲ့ ☺ သူမရဲ့ခွန်အားစွမ်းအင် ကျေးဇူးကြောင့် အင်တာနက် ...